Paikady 10 Marketing amin'ny finday | Martech Zone
Alarobia, Jona 27, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Rehefa miresaka momba ny marketing amin'ny finday ianao dia heveriko fa ny mpivarotra rehetra dia mahazo sary hafa momba ny karazana tetika resahinao. Androany dia nahavita fivoriana fanofanana finday feno izahay miaraka amin'ireo orinasa 50 eo ho eo. Araka ny Marlinspike Consulting niara-niasa taminay tamin'ny fandaharam-pianarana fiofanana, nanjary nazava fa betsaka kokoa ny marketing amin'ny finday noho izay eritreretin'ny olona iray.
Ireto misy paikady 10 Marketing amin'ny finday:
Voice - na izany na tsy izany, diso anjara foana io iray io :). Na mampifandray nomeraon-telefaona fotsiny amin'ny tranokalanao, na mamolavola paikady fitaterana sy valiny feno amin'ny alàlan'ny fitaovan'ny sary mihetsika toy ny Twilio, Manamora ny fiantsoan'ny orinasanao sy ny fahazoanao ny fampahalalana tadiavinao dia hanatsara ny refin'ny fiovam-po.
SMS - Serivisy hafatra fohy, na fandefasana hafatra an-tsoratra, mety tsy ny teknolojia firaisana ara-nofo indrindra eto an-tany, fa ireo orinasa manaparitaka teknolojia fandefasana hafatra dia mitohy mahita fitomboana sy fananganana. Tsy zavatra tanora fotsiny io… maro amintsika no mandefa SMS mihoatra ny taloha.
Doka finday - tsy doka amin'ny faneva taloha ireny. Ireo sehatra fanaovana dokambarotra finday anio dia manosika ny doka mifototra amin'ny maha-zava-dehibe azy, ny toerana sy ny fotoana… mahatonga izany azo inoana fa ho hitan'ny olona mety, amin'ny toerana mety ary amin'ny fotoana mety ny dokambarotrao.
QR Codes - Endrey, mankahala anao aho… nefa miasa ihany izy ireo. Mamaky azy ireo ny telefaona Microsoft nefa tsy mampiasa rindranasa ary raharaham-barotra maro no mahita taham-panavotana lehibe - indrindra rehefa manosika olona manomboka amin'ny pirinty ka hatrany amin'ny Internet. Aza manilika azy ireo fotsiny aloha.
Mailaka finday - mailaka misokatra amin'ny finday nihoatra ny tahan'ny fisokafan'ny birao fa ny mailakao dia ny endrika famoahana bilaogy novidianao 5 taona lasa izay ary tsy afaka mamaky mora amin'ny finday. Inona no andrasanao?
Tranonkala finday - na dia tsy vonona aza ny tranokalanao, dia mety hampiasa fitaovana iray maromaro hanamboarana ny tranonao ianao site mobile friendly. Tsy misy lavorary amin'izy ireo, fa manao tsara kokoa ilay asa noho ny tsy misy. Zahao ny tahan'ny fihenam-bidy amin'ny findainao hahitanao ny fifamoivoizana very anao.
Mobile Commerce (mCommerce) - na ny fividianana hafatra amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra, ny fampiharana finday, na ny fampiharana amin'ny ho avy fifandraisana akaiky eny an-tsaha, mandray fanapahan-kevitra amin'ny fividianana finday ny olona. Afaka mividy amin'ny anao ve izy ireo?
Location Services - raha fantatrao hoe aiza ny mpitsidika anao, maninona no asaianao miteny azy ianao? Tranonkala mifototra amin'ny toerana na ny fampiharana finday dia afaka manamora ny fahitan'ny mpanjifanao anao sy hahatongavany aminao.
Fangatahana finday - Tsy dia nanantena zavatra loatra momba ny fampiharana finday aho tamin'ny voalohany… Nihevitra aho fa hisolo azy ireo ny tranonkala fitetezam-paritany. Saingy tian'ireo olona ny fampiharana azy ireo, ary tian'izy ireo ny fikarohana, ny fikarohana ary ny fividianana avy amin'ireo marika iarahan'izy ireo miasa amin'ny alalàn'izy ireo. Manararaotra fampiharana mailaka, serivisy toerana ary haino aman-jery sosialy eo ambonin'ny fampiharana findainao dia ho hitanao ny fiakaran'ny isa. Aza hadino ny mametraka ny SDK amin'ny tianao Analytics sehatra hahazoana ny fahitana ilainao!
takela-bato - eny, tsy tiako ny manangona vongany miaraka amin'ny finday ihany koa… saingy noho ny fampiharana sy ny mpitety dia toa tsy nitovy izy ireo. Miaraka amin'ny fitomboan'ny iPad, Kindle, Nook ary ny Microsoft Surface ho avy tsy mampino, dia lasa ny takelaka fahitalavitra faharoa ny olona dia mampiasa rehefa mijery tele na mamaky ao amin'ny trano fidiovana (eww). Raha tsy manana swipey ianao fampiharana takelaka (toy ny mpanjifantsika Zmags) izay manararaotra ny fanandraman'ny mpampiasa tokana azon'ny takelaka takiana, tsy hita ianao.
Ny ankamaroan'ny orinasa dia tsy mieritreritra ny zavatra vokariny na serivisiny dia manery azy hametraka paikady finday manodidina. Hanome ohatra tsara iray momba ny orinasa manana rindrambaiko finday tsy mampino ao amin'ny indostria mety tsy hoeritreretinao aho… Behr. Behr dia nanaparitaka a Fampiharana finday ColorSmart izay ahafahanao mijery ireo loko mitambatra, mifanandrify loko iray amin'ny alàlan'ny telefaona fakan-tsarinao, mahita ny fivarotana akaiky indrindra hividianana… sy safidy maro karazana tolo-kevitra momba ny fitambarana loko.
Tags: serivisy toeranafinday fampiharanafinday-barotrapaikady marketing amin'ny findaytranokala marketing amin'ny findayrafitry ny hafatra fohySMSfandefasana hafatra an-tsoratrafeofeo automatique
Dingana ahafahana mamorona pejy Facebook